सत्तागन्धले बतासिएका प्रचण्ड : धमलासँगको अन्तर्वार्तामा कसरी भए छताछुल्ल?
सृजना घिमिरे काठमाडौं - आइतबार, फागुन १६, २०७७
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को एउटा भिडियो क्लिप केही दिनयता लगातार ‘भाइरल’ छ।
१८ सेकेन्डको क्लिपमा प्रचण्ड भन्छन– ‘नेपाली कांग्रेस, जसपासँग आफू मिलेर सरकार बन्दा भारतका लागि ‘कम्फर्टेबल समीकरण’ हुन्छ।’
भारतलाई सजिलो पार्ने भन्नेबित्तिकै आलोचनाको ओइरो लाग्ने भइहाल्यो। खासमा यसले सबैभन्दा बढी सजिलो ओली पक्षलाई गरेको छ। ओली भर्सेस प्रचण्ड द्वन्द्वबाट सिर्जित राष्ट्रिय राजनीतिक संकटले अनौठो फन्को मारिरहँदा प्रचण्डको यो भनाइबाट ओली पक्षले औंल्याउन पाएको छ– ‘देख्यौ त, को रहेछ भारतपरस्त?’
खुलेयाम ‘साइबर सेना’ भनेर स्वनामधन्य बन्न खोजिरहेका ओली पक्षीय कार्यकर्ताको तुषले सामाजिक सञ्जाल पोतिएका छन्। उनीहरू भन्दैछन्– ‘प्रचण्डले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन खोज्नुको रहस्य खुलेको छ।’
भारतसँग ‘कम्फर्टेबल’ के–कसरी?
के साँच्चै प्रचण्डले अब भारतमैत्री सरकार बनाउने भनेर हाकाहाकी बोलेका हुन् त?
प्रचण्डको त्यो भनाइको भावार्थ बुझ्न पत्रकार ऋषि धमलाको ‘जनता जान्न चाहन्छन्’ कार्यक्रमको पूरै ५४ मिनेट सुन्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई राम्ररी सुनेर आयोमेलले प्रचण्डको उक्त विवादास्पद भनाइलाई साँगापाँगो बुझाउने केही रोचक अंश यहाँ उतारेको छ।
प्रचण्डले उल्लेख गरेको ‘कम्फर्टेबल समीकरण’ वाक्याशंको पृष्ठभूमि बुझ्न करिब सात मिनेट अघिदेखिको कुराकानी सुन्न जरुरी छ।
सुरुमा हामी अन्तर्वार्ताको ठिक ३० मिनेट ५१ सेकेन्डमा गएर अडिउँ :
ऋषि धमला : अब तपाईं प्रधानमन्त्री बन्न तयार भएर आउनुभएको छ। तपाई‌काे पार्टीको संसदीय दलको नेता तपाईं नैं हो नि त आजको दिनमा। अब शेरबहादुर देउवा पनि प्रधानमन्त्री बन्न तयार हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको छ, मलाई साथ दिनुस्, अविश्वास प्रस्ताव असफल बनाऔं। प्रधानमन्त्री तपाईं बन्नुस् भनेर, शेरबहादुर देउवालाई केपी शर्मा ओलीले प्रस्ताव गरिसकेको अवस्थामा अब भावी प्रधानमन्त्री हाम्रो देशको को हो त प्रचण्डजी?
प्रचण्डको जवाफ : पहिलो कुरा मैले प्रधानमन्त्री म हुन पर्छ भनेर मेरो दाबी छैन भनेर मैले धेरैपटक भनेँ। फेरि पनि दोहोर्‍याएर तपाईंले प्रश्न सोध्नुभयो, म फेरि भन्छु– म प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्दिनँ। म स्थायित्व र समृद्धि हुने वातावरण बनाउन चाहन्छु। पहिलो कुरा, यो कुरा प्रष्ट बुझिनुपर्‍यो। मेरो दाबीमै प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने छैन र अहिलेको परिस्थिति हेर्दा मैले फेरि पनि भनेँ, १२ बुँदेदेखिका सहयात्री र अहिले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेर सडकमा गएकाजतिहरूको सरकार बन्नुपर्‍याे।
अनि केपी ओली असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम चैं उनले चाल्ने, सर्वोच्चले फैसला गरेर त्यसलाई करेक्सन गर्ने। अनि केपी ओलीसँग लाग्छन् त शेरबहादुर देउवा? म पत्याउँदै पत्याउन्नँ। कसरी लाग्न सक्छन्? असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, निरंकुश, स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिसँग सडकमा जाने, त्यो भनेर पार्टीले निर्णय गर्ने कसरी हुनसक्छ त्यो? अनि ऐले जो मुद्दा मिल्यो, मुद्दाका आधारमा गर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुँदा नि हुन्छ, अर्को हुँदा नि हुन्छ, जसपाबाट कोही आउँछ त्यहाँ सल्लाह गरेर सहमति हुन्छ भने पनि हुन्छ। मेरो चैं म प्रधानमन्त्री हुनुपर्‍याे भन्ने दाबी अहिले मेरो छैन। मैले गरेकै छैन, गर्दिनँ पनि।
बीचैमा धमलाको प्रतिप्रश्न :परिवर्तनकारी शक्तिले भन्यो भने तपाईं तयार हुनुहुन्छ नि प्रधानमन्त्री बन्न त्यतिखेर?
प्रचण्डको जवाफ : अब त्यो त, त्यो...
धमलाले बीचैमा फेरि ‘काउन्टर’ प्रश्न गर्छन् : सहमति भयो तपाईंको नाममा?
प्रचण्डको जवाफ : अब सहमति जहाँ हुन्छ, त्यहाँ गर्नुपर्छ। समझदारी जहाँ हुन्छ। त्यहाँ गर्नुपर्छ। मेरा मै समझदारी गर भन्ने मेरो छैन भनेसी तपाईं बुझ्नुस् न कुरा। मैले त सिधै भनेँ नि त। सिधै छ मेरो त कुरा।
धमलाले फेरि सोधे : त्यसोभा अबको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा कि बाबुराम भट्टराई कि, तपाईं कि माधवकुमार नेपाल?
प्रचण्ड : अहिले म त्यसरी भन्न सक्दिनँ। राजनीतिक दलहरू सबैसँग कुराकानी सुरु भएको छ। मलाई लाग्छ दुई–चार दिनभित्रै एउटा समझदारीमा पुग्छ भन्ने छ र मेरो पुर्‍याउने कोसिस हुन्छ। तर, मलाई मान्दिनुस् भनेर म भन्दिनँ।
धमलाको ‘हमला’ रोकिएन : होइन, प्रधानमन्त्री त शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउँछु भनिरहँदा तपाईंले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि तयारी भएर अगाडि बढ्ने सम्भावना छ कि छैन?
प्रचण्डको जवाफ उस्तै थियो : छ, यो त मैले पहिला नै भनेको छु त। शेरबहादुर देउवाजीका बारेमा त मैले पहिला नै भनेको छु नि। यो कुरा त पहिला सार्वजनिक गरेकै कुरा हो नि।
बीचमा धमलाको केरकार : तपाईंले मेरै कार्यक्रममा भन्नुभएको छ, जनता जान्न चाहन्छन् मा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा मुलुक अगाडि बढ्न सक्छ।
प्रचण्ड : हो, मैले भनेको हो। कतिपटक भन्ने क्या। अब मैले भनेँ नि अब यो मुद्दामा जो सहमत भएर सडकमा गयौं, तिनीहरूमध्येबाटै हुनुपर्छ। त्यसमध्ये एउटा शेरबहादुर देउवाजी हो। क्लियर छ नि त यो कुरा। तर, अहिले मैले उहाँ नै हो भनेर डिक्लियर गर्ने स्थिति होइन नि यो। उहाँसँग पनि कुरा भइरहेको छ। जसपासँग पनि कुरा भइरहेको छ भने सल्लाह समझदारीबाट जाउँ भन्ने कुरा गरिनै राख्या छ। त्यसकारण यहाँ त विवादको कुरा छैन नि। हाम्रो तर्फबाट विवाद हुँदैन।
प्रचण्डले यति भनिनसक्दै धमला फेरि सोध्छन् : तर, विवाद हुने हो कि पदका लागि फेरि पनि विवाद हुने हो कि तपाईंहरूबीच?
यसमा प्रचण्डको जवाफ :
हाम्रो त्यस्तो हुँदैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) तिरबाट विवाद हुँदैन। यो कुरा तपाईंलाई क्लियरली भन्न चाहन्छु।
धमला : तर, नेकपा फुटेको छैन नि, कांग्रेसले तपाईंलाई फुटाएर आउन आग्रह गरेको छ नि? तपाईं पार्टी फुटाउन तयार हुनुहुन्छ?
प्रचण्ड मिश्रित भावमा :
पार्टी त फुटिसक्यो भनिराछु म। फेरि यो कुरा...
पार्टी त फुटाइसक्नु भयो केपीजीले। त्यसकारण पार्टी त एउटै छैन। उहाँले सयजना लिएर, १५०१ को केन्द्रीय समिति बनाएसी पार्टी फुटाएको होइन? संसद भंग गर्ने निर्णय गरेपछि पार्टी फुटाएको होइन? र, त्यो पार्टी फुटाएको अबैध छ फेरि। वैध त छैन उहाँको। न कानुनअनुसार ४० प्रतिशत पुगेको छ, न राजनीतिकरूपले हिजोको हाम्रो सहमति अनुकूल छ। उहाँले त फुटाइ नै सक्नुभयो। हामी त फुट्या त छैनौं नि। हामीसँग त दुईतिहाइ बहुमतसहितको केन्द्रीय सदस्य छौं हामी। बकाइदा केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गरेका छौं। निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकताको दाबी पनि प्रस्तुत गरेका छौं। ४४ (१) अनुसार अघि बढोस् पनि हामीले भनिसकेका छौं।
त्यसकारण तपाईंले चैं, सोध्दाखेरि या अरूले पनि खोइ फुटेको भनेर भन्ने त यो त निर्वाचन आयोगलाई हामी सबैले ऐनअनुसार गरिहाल त पो भन्नुपर्‍याे ।
नेपाली कांग्रेसले प्रचण्ड–माधवलाई भन्ने भन्दा पनि कसलाई भन्नुपर्‍यो त, संविधानअनुसार अगाडि ल्याइएको संस्था निर्वाचन आयोग। जसले फैसला गर्दिनुपर्छ। जहाँ आधिकारिकताको दाबीसहितको दस्तावेज छन्। सबैले मिलेर आयोगलाई भन्नुपर्‍याे। उज्यालोजस्तो छ्याङ्ग छ नि कुरा, फुटी त सक्या हो पार्टी।
धमला : त्यसोभए संयुक्त सरकार बन्छ? तीन पार्टीको सरकार बन्छ भन्नेमा तपाईं...?
धमलाको प्रश्न नसकिँदै प्रचण्ड :
मलाई के लाग्छ भने हेर्नुस्, हिजो गणतन्त्रको आन्दोलन गर्दा, यो असम्भव कुरा हो भन्ने केपी ओली। हिजो शान्ति प्रक्रियामा माओवादीलाई पनि सकारात्मक ढंगले ल्याउनुपर्छ भनेर माधव नेपालले पठाएर बामदेव गौतम र युवराज ज्ञवाली रोल्पा जानुभयो। म र बाबुराम थियौं। पहिलोपटक माइनुट गरियो। अब हामी मिलेर जाने भनियो। त्यो भन्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ। आतंककारीसँग गएर यसो भन्ने, भन्ने केपी ओली। समानुपातिक समावेशीता हुनुहुँदैन भन्ने केपी ओली। हिजो गणतन्त्रको आन्दोलनको नेता त माधव नेपाल हो नि त। गणतन्त्रकै निम्ति जानुपर्छ भन्ने महासचिव त उहाँ हुनुहुन्थ्यो नि त आन्दोलनभरि। भनेपछि हामी सबै त यहीँ छौं। माधवजी यहीँ हुनुहुन्छ। हामी सँगै छौं। शेरबहादुरजी पनि नेपाली कांग्रेसको नेता, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले हिजो साहस नगरेको भए, पहल नलिएको भए, शान्ति सम्झौता हुन गाह्रो थियो। सात दलको नेताको हैसियतले उहाँले भूमिका खेल्नुभयो। शान्ति सम्झौतामा दुइटाले हस्ताक्षर गरियो। त्यो सबै शक्ति त हामी एकै ठाउँमा छौं नि। यी शक्ति मिल्नुपर्‍याे भन्या हो। यहाँ कोही कसैका विरुद्ध षडयन्त्र होइन यो। ती शक्ति मिल्दा नै देशमा राजनीतिक स्थायित्वको वातावरण बन्ने भयो। र, इतिहासले जसलाई अगाडि बढ भनेको तिनीहरू नै अगाडि बढ्नुपर्‍याे क्या। नबढ भनेका मान्छेलाई कताकताबाट ल्याइयो र पो त यहाँ दु:ख पाइयो।
अन्तर्वार्ताको ३७औं मिनेटपछि बल्ल प्रचण्डले संयुक्त सरकारको आवश्यकता किन भन्नेबारे बेलिविस्तार लगाउन सुरु गरे। ठ्याक्कै त्यहीँ भारतको कुरा जोडिएको छ।
त्यसैले हाम्रो भनाइ नेपाली कांग्रेस, हामी र जनता समाजवादी पार्टी मिलेर जाँदा चेक एन्ड ब्यालेन्स पनि हुन्छ देशको राजनीति। सन्तुलनमा बस्छ। सबै छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध पनि राम्रो भएर जान्छ। भारतसँग पनि, चीनसँग पनि राम्रो सन्तुलन हुन्छ। अझ भारतसँग हाम्रो जो विशिष्ट सम्बन्ध छ। हाम्रो इतिहास र भूगोल, संस्कृति, धर्म, परम्परा, हाम्रो अर्थतन्त्र, पानीढलो, खुला बोर्डर सबै कारणले भारतसँग राम्रो समझदारी नबनाइकन पनि नेपालमा स्थायित्व त, विकास त हुँदैन। त्यसैले म के देख्छु भने नेपाली कांग्रेस, हामी र जनता समाजवादी पार्टी मिल्नु भनेको भारतका निम्ति पनि योभन्दा कम्फर्टेबल समीकरण हुँदैन। चीनका निम्ति पनि यो कम्फर्टेबलै हुन्छ। भनेपछि यति राम्रो सम्भावना छ, यो सम्भावनामा जानुपर्‍यो भनेर भनेको छु। आत्मसमीक्षासहित भनेको छु फेरि। अर्को तरिकाले हुन्छ कि भनेको भएन। त्यसमा केही त्रुटि भयो पनि भनेको छु मैले। त्यसैले मलाई पुस्तकको खुला पन्ना बुझिदिए हुन्छ। म खुला छु। र, यो नै सबैको हितमा हुन्छ भन्ने मेरो भनाइ हो।
प्रचण्डले भारतका लागि उनीहरूले भनेजस्तो तीन पार्टी मिलेर सरकार बन्दा कम्फर्टेबल समीकरण हुन्छ भनेका हुन्। र, सँगै उनले चीनका लागि पनि त्यो समीकरण ‘कम्फर्टेबलै’ हुने भनेका छन्। जुन कुरा सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनाइएको १८ सेकेन्डको भिडियोमा छैन।
अझ प्रचण्डले भने झैं नेपालको भारतसँग विशिष्ट सम्बन्ध छ भन्ने कुरामा सायद हामी कसैको दुईमत छैन, पछिल्लो सीमा विवाद प्रकरणबाहेक।
जसरी सामाजिक सञ्जालमा भिडियो काटेर, १८ सेकेन्डको मात्र भाइरल बनाइएको छ, त्यसले देशको पछिल्लो पेचिलो राजनीतिमा झनै घिउ थप्ने काम गरेको छ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, फागुन १६, २०७७
गृहमन्त्री थापाको ठाउँमा राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचन निर्वाचन जेठ ६ गते
राष्ट्रियसभा सदस्यबाट पदमुक्त भएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको स्थानमा जेठ ६ गते निर्वाचन हुने भएको छ। दल त्याग गरेर एमालेमा प्रवेश गरेपछि पदमुक्त भएको थापाको स्थानमा जेठ ६ गते उपनिर्वाचन गर्ने निर्णय निर्वाचन आयोगले गरेको हो। आयोमेल संवाददाता